PC & Laptops – DigitalTimes
Apple NEWS PC & Laptops Softwares & Application
Mac အတွက် Chrome 73 မှာ Dark Mode ပါဝင်လာ
Mac နဲ့ Windows အတွက် ယနေ့ တရားဝင် ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ Chrome browser stable version 73 မှာ Dark Mode ပါဝင်လာပါတယ်။…
FEATURES HOW TO Pc & Laptops PC & Laptops Tips
ကွန်ပြူတာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အယူအဆများစွာ ၊ နည်းလမ်းများစွာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအယူအဆ တွေထဲက အချို့ ဟာ မှားယွင်းနေပါတယ်။ အဲဒီအမှားတွေ ကို ရှောင်ရှားနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို…
Lenovo NEWS PC & Laptops
OLED Laptops အသစ်တွေကို HP နဲ့ Lenovo တို့ မိတ်ဆက်
CES 2019 ပွဲမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ ဂိမ်းမင်းလက်ပ်တော့တွေအပြင် OLED Display ပါဝင်တဲ့ လက်ပ်တော့မော်ဒယ်အသစ် ၂ မျိုးကိုလည်း မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ HP နဲ့ Lenovo လက်ပ်တော့တွေပါ။…
Acer NEWS PC & Laptops
AMD Processor သုံး ပထမဆုံး Chromebooks တွေကို HP နဲ့ Acer တို့ မိတ်ဆက်
HP နဲ့ Acer ဟာ AMD Processor အသုံးပြုထားတဲ့ ပထမဆုံး Chromebooks တွေကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ အရင် Chromebook တွေတုန်းက Intel နဲ့…
HOW TO Mobiles & Tablets PC & Laptops Softwares & Application
PC ကနေ ဖုန်း SMS အဝင်အထွက် ပြုလုပ်နည်း
Android ဖုန်းက SMS အဝင်၊ အထွက်တွေကို မည်သည့် ကွန်ပျူတာကနေ မဆို ပြုလုပ်နိုင်တာကို သင် သိပြီးပါပြီလား။ မသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ ယခု နည်းလမ်းလေးက သင့်အတွက် အသုံးဝင်မှာပါ။…
HOW TO HUBS Microsoft PC & Laptops Softwares & Application
Windows 10 ကို အလွယ်ကူဆုံး Clean Installation လုပ်နည်း
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Windows ပြန်တင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ဖိုင်တွေ၊ ဒေတာတွေ တခုမှ မပျောက်ဆုံးဘဲ၊ Settings တွေကအစ ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း အဆင်သင့်ပြန်သုံးနိုင်တဲ့ Clean Installation နည်းလမ်းတခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ Fresh…
FEATURES HOW TO Mobile & Tablets Mobiles & Tablets Pc & Laptops PC & Laptops
သင့်ရဲ့ iPad ကို Laptop လို ဘယ်လို အသုံးပြုမလဲ ?
iPad ကို လက်တော့လို အသုံးပြုနိုင်မလားဆိုတဲ့ ငြင်းခုန်ဆွေးနွေးပွဲဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ကတည်းက ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်တော့လိုပါ အသုံးပြုနိုင်ရင် အလုပ်ကိစ္စများ ပြုလုပ်ရာမှာ ပိုမိုတွင်ကျယ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။…
PC ရဲ့ဗီဒီယို player တွေထဲမှာ ဘုရင်လို့တင်စားရလောက်သူကတော့ VLC Media Player ပါပဲ။ VLC က သူ့ရဲ့ Interface ကိုလုံးဝကြီးမပြောင်းလဲပေမယ့်လို့ လိုအပ်ချက်သေးသေးလေးချင်းကို မြှင့်မြှင့်သွားတဲ့အတွက်…
FEATURES HOW TO Pc & Laptops PC & Laptops
Laptop တစ်လုံးကို ဘယ်လို သန့်ရှင်းရေး လုပ်မလဲ ?
လက်တော့ တစ်လုံးကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ခြင်းဟာ သူ့ရဲ့ သက်တမ်းကို ကြာရှည်စေပါတယ်။ ကွန်ပြူတာ ကီးဘုတ်တွေဟာ ရောဂါပိုးမွှားတွေ ပြည့်နှက်နေတယ်လို့ Wall Street Journal က ရေးသားထားပါတယ်။…
Web Browser အသုံးပြုတဲ့ အခါတွေမှာ Website တွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Location ကို အသုံးပြုချင်တဲ့ Notification တွေ ပို့ပေးတာကို အားလုံးဘဲ ကြုံဖူး ကြမှာပါ။…
FEATURES HOW TO Life Style Mobile & Tablets Mobiles & Tablets Pc & Laptops PC & Laptops Softwares & Application Softwares & Application Tips
Online မှာ Hack မခံရအောင် ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ ?
မကြာမီက သတင်းတွေမှာ အစိုးရရဲ့ ထောက်လှမ်းမှုတွေ၊ ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး အားနည်းမှုတွေ၊ တစ်ပြုံတစ်မ Hackခံရမှုတွေ ကြားနေရတဲ့အတွက် အွန်လိုင်းမှာ လုံခြုံအောင်နေဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲလှပါတယ်။ အမေရိကန် အမျိုးသားလုံခြုံရေးအေဂျင်စီ NSAရဲ့…
သင့် Laptopရဲ့ Batteryကို ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်မယ့် နည်းများကို ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနည်းတွေက သင့် Laptopကို အားသွင်းလို့မရတဲ့ အခြေအနေမှာ များစွာ အထောက်အကူ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Screen…
FEATURES HOW TO Mobile & Tablets Mobiles & Tablets Pc & Laptops PC & Laptops Softwares & Application Softwares & Application
စမတ်ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျုတာကို အကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်မယ့် နည်းလမ်း ၄ ချက်
နည်းပညာတိုးတက်မှုရဲ့နောက်မှာတော့ လူသားတွေဟာသူ့တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ အီလက်ထရောစနစ်ပစည်းတွေကိုမှန်ကန်စွာအသုံးချလာကြပါတယ်။ မိုဘိုင်းဖုန်း၊ပီစီတွေသာမကဘဲသူတို့တွေမှာထည့်သွင်းသုံးစွဲရတဲ့ app,software တွေကသေချာသာသုံးသတ်မယ်ဆိုရင်နေ့စဉ်ဘဝတဲ့မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကို ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ အောက်မှာဖော်ပြပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကတော့ သင့်ဖုန်း၊ပီစီ၊appတွေကိုပေါင်းစပ်အသုံးချနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ သင့်ပီစီကိုအရင်အချိန်သို့ Restore လုပ်ခြင်း သင်ဟာ Driver အသစ်တစ်ခုကိုအင်စတောလုပ်ပြီးပီစီဟာ…
Acer PC & Laptops
Acer မှ Gamers တွေအတွက် အထူးထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ 180 Degree လှည့်နိုင်တဲ့ Red Nitro5Spin Laptop အား ကြေငြာ
Acer က gamers တွေအတွက် Notebooks Designed ပုံစံပြောင်းလဲမှုအသစ်နဲ့ အရောင်ခပ်ဆန်းဆန်း Laptop ထွက်လာပါတယ်။Nitro5Spin က 15.6” IPS display…
Apple Pc & Laptops PC & Laptops Xiaomi
Laptop ပိုင်းမှာပါ Apple ရဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ နာမည်ကိုယူပြီး ထွက်ရှိလာတဲ့ Xiaomi ရဲ့ Mi Notebook Pro
Xiaomi မှာ Laptop ဈေးကွက်ထဲကို အရင်နှစ်ထဲက Mi Notebook Air နဲ့ ဝင်လာပြီး Apple ရဲ့ MacBook ကို ဒီဇိုင်းယူသုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ထဲမှာ တရုတ်ကုမ္မဏီတွေဟာ…